Amerika Latina · Jona, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Jona, 2010
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Jona, 2010
Venezoela 29 Jona 2010
Ny tantara lavan'ireo fitsabahana amin'ireo banky any Venezuela [EN], dia nitarika tsaho marobe tsy azo nosorohana momba ny hoe banky iza indray no hiharan'ny fitsabahana ato ho ato. Ny Banky Federaly, niharany ny herinandro lasa teo, dia banky faha-roa ambinifolo nitsabahan'ny Governemanta nanomboka ny volana Novambra 2009. Herinandro lasa izay,...
Però 28 Jona 2010
Nandritra ny roa andro, dia nampiantrano an'ireo tompondaka roa erantanin'ny echec, Gary Kasparov sy Anatoly Karpov i Lima. Samy tonga hanao lalao fampisehoana izy roa ireo, izay nifanandrinan'izy ireo tamina ankizy 25: 20 amin'izy ireo dia nofidian'ny Federasiona Perovianin'ny lalaontsaina Echec ary ny ambiny dia nalaina avy amin'ny mpijery. Na...
Kolombia 26 Jona 2010
Meksika: vonona hifanandrina amin'i Frantsa
Meksika 19 Jona 2010
Milalao ao anatin'ny vondrona A mifanandrina amin'i Uruguay, Frantsa ary Africa Atsimo ny ekipa Meksikana amin'ity Mondial FIFA 2010 ity. Amin'ny lalao fanokafana dia I Meksika no nifanandrina tamin'ny mpampiantrano, Afrika Atsimo. Na dia nifarana tamin'ny 1-1 aza ny lalao, dia namela marika tsara sy nampisy tara-panantenana ho an'ireo mpanohana...
Argentina: Fankalazana ny faha-roanjato taona amin'ny aterineto
Karaiba 05 Jona 2010
Nankalaza ny faha-200 taonan'ny fiandohan'ny fanasarahana azy tamin'i Espana i Argentina, nanomboka ny May 25, 1810. Tamin'io fotoana io, komity iray tao an-toerana no nanapa-kevitra ny hanongana ny mpanjaka lefitra Espaniola ary hanomboka ny fananganana Governemanta mahaleotena. Isan'ny ao anatin'ity fankalazana ity, eo anelanelan'ny 21-25 May, dia hisy fihetsiketsehana maro,...
Goatemalà 03 Jona 2010
Amerika Avaratra 02 Jona 2010